Ny Pulse Powder Mampidi-doza Indrindra Manerantany Amin'ny Tontolo Izao | AASraw
/Blog/Aretina mahatsiravina/Ny 8 mampihetsi-po indrindra amin'ny herisetra mampihoron-koditra manerana izao tontolo izao
Posted on 08 / 29 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Aretina mahatsiravina. Manana izany 59 Comments.
Ny fahaverezan'ny libido, amin'ny vehivavy sy ny lehilahy, dia olana iraisana, matetika noho ny reraka, ny adin-tsaina, ny taona na ny fahazarana fotsiny. Mba hanentanana ny faniriana dia misy ny fanafody mamoafady izay ampiasaina hanatsarana izany.
Ao amin'ny 1998, ny Fitondrandraharahan'ny sakafo sy ny zava-mahadomelina avy any Etazonia sy Eoropa (FDA sy EFSA) dia nankato ny ED noho ny fitsaboana ny Viagra (), izay nahatonga fahatsapana manerantany. Ny valin'ny fitsaboana amin'ny sildenafil citrate 171599-83-0 dia navoaka tao amin'ny gazety fitsaboana lehibe indrindra ao New England Journal of Medicine.
Ireo ampiasain'ny lehilahy
Tadalafil (171596-29-5), dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny dysfunction erectile. Ny tadalafil dia fanafody mampitombo ny karazana phosphodiesterase enzyme 5 (PDE-5) izay tompon'andraikitra amin'ny fanesorana ny oksidia nitroka vasodilator, izay amidy ankehitriny ho takelaka tanaty anarana antsoina hoe Cialis. Nalaina vao haingana ihany koa izy ho an'ny fitsaboana aretin-tsaina, ary nampiasaina ho an'ny toe-javatra hafa. Ny tablety ny Cialis, ny 5mg, 10mg sy 20mg ny dosie, dia mavo mavo misy sarimihetsika miaraka amin'ny endriky ny mandro. Ny dosie ankasitrahana ho an'ny hypertension ho an'ny pulmonary dia 20 mg ary dia zaraina amin'ny marika Adcirca.
Ny fikarohana ara-pahasalamana dia nanaporofo fa ny tadalafil dia afaka manatsara ny fiantraikan'ny antihypertensive ny zava-mahadomelina nitrate. Izany dia heverina fa vokatry ny fifangaroan'ny nitrate sy ny tadalafil amin'ny lalana oksidina / cGMP. Noho izany, ny marary mandray ny endriky ny nitrita dia voarara tsy handray izany vokatra izany.
Ny sildenafil citrate 171599-83-0 dia zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny fikarakarana ny dysfunction erectile sy ny homamiadan'ny aretin-tsaina (PPH). Sildenafil dia mety manakana ny asa atao PDE5 amin'ny olona. Ny PDE5 dia miseho tsara amin'ny sponge penis ary ambany amin'ny vatan'ny andoha hafa sy ny taova. Rehefa avy nodiovina ny sildenafil, ny tsiranoka cavernosum cavernosum dia mifamoivoy eo ambanin'ny fihetsika ny zava-mahadomelina, mihamitombo ny fitomboan'ny rà, mihena ny vatana ary mihatra ny penis, ka mahatonga vokatra ara-pahasalamana momba ny dysfunction erectile penile.
Ny marary amin'ny dysfunction erectile penile dia manana faharetan'ny hetsika 27 minitra aorian'ny fampiasana am-bava (fizarana klinika eo anelanelan'ny 12 sy 70 minitra).
Vardenafil 224785-91-5 dia ampiasaina mba hanatrarana dysfunction erectile penile. Ity zava-mahadomelina ity dia karazan'antoka 5 phosphodiesterase (PDE5). Ny fitsaboana ara-pahasalamana io zava-mahadomelina io dia afaka manatsara ny kalitaon'ny faharetan'ny toetr'andro sy ny fampihenana ny fahombiazan'ny lehilahy amin'ny marary amin'ny dysfunction. Ny fanombohana sy ny fikojakojana ny fananganana penile dia mifandraika amin'ny fialam-boly hozatry ny fihinam-bolo marevaka.
Levitra vardenafil effectiveness, vardenafil can also prevent pre-ejaculation.
Avanafil 330784-47-9 dia fanafody fitsaboana avy amin'ny vondrona PDE-5 tohibitors ampiasaina amin'ny fitsaboana ny dysfunction erectile. Vardenafil has been clinically proven to be a new generation of phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitor, and vardenafil hydrochloride is highly potent, highly selective, and well tolerated. Ny fahatongavan'izy ireo dia nitondra safidy vaovao amin'ny fitsaboana ny dysfunction erectile (ED).
Mandra-pahoviana dia i Cialis 20mg no miasa?
Ny vokatry ny inhibitors PDE-5 dia mitaky firaisana ara-nofo. Miankina amin'ny herin'ny fahafaha-mamaritra sy ny fahalefahana, ny doka dia mety hitombo hatramin'ny 200 mg na farafaharatsiny amin'ny 50 mg. Raha oharina amin'ny tohibitor hafa PDE-5, dia hita ny fisafidianana avoakan'ny avanafil ho an'ny phosphodiesterase-5 (PDE-5), ka nahatonga kokoa ny fahamendrehana.
Zydena (Udenafil 268203-93-6) dia novolavola tany Korea Atsimo (avy amin'ny Dong-A Pharm), natomboka tamin'ny 2005. Udenafil dia inhibitoran'ny PDE-5. Ny Zydena dia heverina ho zava-mahadomelina azo antoka amin'ny tsy fetezena amin'ny erectile tsy misy fiantraikany ratsy toy ny fahitana marevaka, tsy misy voka-dratsy hafa hita hatramin'izao. Saingy fotoana fohy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, tsy misy fianarana be loatra. Ilaina ny 30 minitra mba hanatanterahana ilay fanafody. Ny voka-dratsiny, ny endrika dosage, ny fanoherana, ny fomba fihetsika dia mitovy amin'ny Viagra.
Flibanserin 147359-76-0 dia fanafody nentina nampiasaina ho fitsaboana ny fahaketrahana, saingy hita fa tsy mahomby eo amin'io sehatra io ary efa nekena indray noho ny fitsaboana ny fihanaky ny fahantrana ara-nofo (HSDD) amin'ny vehivavy - na izany aza, ny fahavoazana tsy voamarina eto dia niteraka adihevitra marobe manodidina ny lohahevitry ny flibanserin (Addyi) sy ny vokatr'izany.
aasraw. com Nandritra ny fisedrana ara-pitsaboana natao, dia voaporofo fa ny tsimok'aretina dia manatsara ny 0.5 sy 1 ny isan'ny fahombiazana ara-pananahana mahomby mandritra ny iray volana, mampitaha azy amin'ny plasbo, maivana nefa tsy misy dikany. Ireo vehivavy nandray anjara tamin'ilay fianarana dia nanomboka izany miaraka amin'ny salan'isan'ny firaisana ara-nofo eo amin'ny 2 sy 3 mahafa-po.
Flibanserin HCL Fihetsiketsehan'ny hetsika, izy dia miasa amin'ny lalan'ny neurotransmitter, na fientanam-po sy fanodikodinana. Amin'ny alalan'ny hetsika agonista ao amin'ny 5-HT 1A mpandray ny serotonin, fomba fiasa mitovy amin'ny an'ny zava-mahadomelina samihafa ary amin'ny alalan'ny fihetsika manohitra ny mpanolo-tsaina 5-HT 2A.
Ny dapoxetine HCL 119356-77-3 dia zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny fitsaboana ny ejaculation aloha. Izy io dia tsimok'aretina serotonina mifototra amin'ny fihenanam-potoana fohy sy fihetsika. Amin'ny alàlan'ny toe-javatra iainana teo aloha dia azo atao ny mihevitra fa ny fitomboan'ny taovam-pandevonan-tsakram-pihantsiana dia mety haharitra telo ka hatramin'ny enina. Ankoatra izany, ny dapoxetine dia afaka manatsara ny fahafaham-pon'ny lahy sy ny vavy ary ny fanaraha-maso ny ejaculation lahy, ary mampihena ny fahasarotan'ny fijaliana sy ny fifankatiavana.
Dyclonine HCL 536-43-6 dia fanitsiana ara-pahaizana manokana izay azo ampiasaina amin'ny fanolanana ny membranes migraine alohan'ny fitsaboana sy ny fomba fitsaboana. Izy io koa dia hita ao amin'ny lozenges sy solitany ho an'ny tendany sy ny tenda. Azo ampiasaina koa ny dyclonine hanafoanana ny gag reflex.
Ity vokatra ity dia afaka manakana ny fifindran'ny otrikaretina na ny tsindrona isan-karazany, manakana ny fahatsapana sy ny fanaintainana, ary misy fiantraikany amin'ny otrikaretina, ny antipruritika ary ny bakterizidia eo amin'ny hoditra.
Ity vokatra ity dia karazana aretin-ketônika ao an-toerana. Manana haingana izy io ary maharitra ela. Manana tsindrona antipreritika, analsika sy bakterizidana eo amin'ny hoditra izy io.
Famaranana sy fanolorana
Antony tokony hakana rongony
Ny dokotera mamo dia afaka manampy anao hamaha olana sasany. Na izany aza, raha mbola tsy voavaha vetivety ny olana mahazo anao, aza misalasala manatona mpitsabo (sexologista na dokotera) hanehoana ny olanao. Ity farany dia hanome toro-hevitra sy vahaolana hiadiana amin'izany. Ireto ny tanjona amin'ny antsipirihany amin'ny zava-mahadomelina momba ny firaisana.
- Manompoa fahafinaretana mandritra ny firaisana ara-nofo
Ity no tanjona lehibe indrindra amin'ny fanolokoloana ara-pananahana: hanampiana ny olona hifalifaly rehefa manao firaisana amin'ny vadin'izy ireo. Noho izany dia zava-dehibe ny handraisana ny dosage voalaza eo amin'ny boaty famokarana, fa raha manaja azy ianao, ny fahafahana libido ihany no afaka mampitombo ary ny faniriana ny tatitra ihany no hita.
- Hamelezana ny ady ary miady amin'ny olana amin'ny fitrandrahana
Raha miatrika olana iray ianao, dia afaka manampy anao hiady amin'ny zava-mahadomelina izany. Ankoatra ny ady amin'ity aretina ity dia hahita lahy sy vavy ihany koa ianao ary afaka manome fahafaham-po ny vadinao raha tsy matahotra ny "fisarahana" mandritra ny hetsika; fahatsapana hafahafa sy mahamenatra amin'ny fotoana iray.
Ny vehivavy dia tsy misy dikany amin'ny fanakanana. Eto indray, mba hiadiana amin'ity olana ity dia mety mahaliana ny fitsaboana zava-mahadomelina. Miaraka amin'ity vehivavy farany ity, ny fijanonanao dia hanjavona ary hahatsapa ho tanteraka kokoa ianao rehefa manao zavatra.
- Hanatsara ny firaisana ara-nofo sy ny fifandraisanao
Te hanao firaisana ve ianao? Manonofy hahita fahafinaretana amin'ny fihetsikao ve ianao? Ny dokotera mamo dia afaka manampy anao hamerina ireo fahatsapana ireo! Ity vokatra ity dia azo raisina ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy maniry ny hiaina firaisana ara-nofo lehibe ary maniry ny hisian'ny fifandraisana eo amin'ny fepetra tsara indrindra.
Ny fampidirana rongony amin'ny tovovavy dia ho fanampiana lehibe sy fisaorana azy, ny fifandraisana akaiky dia ho mihoatra noho ny tonga lafatra!
- Mampitombo ny libido anao
Mandritra ny fiainana dia misy fotoana izay tsy hanirian'ny lehilahy na ny vehivavy hanao firaisana amin'ny vadiny. Ity olana ity dia tena ara-tsaina ary mety ho noho ny antony maro samihafa: ny fahatoranana, ny olana manokana, ny adin-tsaina ... Afaka miteraka fahalalahana sy fahafinaretana ireo.
Mba hahazoana indray ireo fahatsapana roa ireo, dia mety hahomby ny fakana rongony. Raha ny marina, afaka manampy anao hampivelatra ny libido anao izany ary hiverina indray ny fialan-tsasatra ara-piraisana!
Ary raha tianao ny toro-hevitra mba hampandroso ny fahafinaretana, ity dia lahatsoratra mahasoa!
Inona no zava-mahadomelina indrindra amin'ny lehilahy?
Amin'izao fotoana izao, maro ny firaisana ara-nofo ho an'ny lehilahy eny an-tsena. Ny fikarakarana sy ny fividianana ny tsara indrindra dia mety ho sarotra ary tsy mahalana ny mahita ny very very eo anatrehan'ireo safidy maro ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia omeko anao fanafody maromaro mahomby izay hanampy anao hanatsara ny libido anao!
Fa alohan'ny ahitanao azy ireo dia fantaro fa ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny miresaka amin'ny dokotera. Ity mpiasa matihanina ity dia hilaza aminao raha ilaina ny fakana aina ary raha mifanaraka amin'ny toe-pahasalamanao ankapobeny. Na ahoana na ahoana, ny ankamaroan'ny fikarakarana firaisana ara-nofo toy ny Viagra na Vialis dia azo omena ihany amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana, ary noho izany dia ilaina ny manatona dokotera raha te hahazo azy ireo.
Ary koa, ny vokatra samihafa atolotra etsy ambany dia tsy aphrodisiacs. Tsy eo izy ireo mba hampitombo ny libido, fa mikasa ny hampitombo ny fidinan'ny rà ao amin'ny penis anao mba hahazoana sy hitazona rafitra araka ny tokony ho izy mandritra ny firaisana ara-nofo.
Ireo fanentanana ireo dia hanampy anao hanana fiorenana mahafa-po, nefa tsy misy ezaka. Mba hahatontosana izany dia tsy maintsy atao ny fanentanana ara-nofo.
Valiny valinteny valin'ny 59
admin, admin09 / 29 / 2018 ao amin'ny 6: 06 am
Amin'ny maha-inhibitor PDE5 dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny fandehanan-dra, ny fahatsentsenan'ny fo haingana kokoa dia ny fisehoan'ny voka-dratsiny
admin, admin09 / 29 / 2018 ao amin'ny 5: 17 am
Ao amin'ny lahatsoratra sisa dia hizara ny tsipiriany momba ny fampiasana zava-mahadomelina momba ny firaisana. Tadiavo ny tadalafil mifandray amin'ny zava-mahadomelina, fifandraisana medikaly flibanserin ... sns.
admin, admin09 / 29 / 2018 ao amin'ny 5: 09 am
Ao amin'ny lahatsoratra sisa, dia hizara fanazavana amin'ny antsipirihany momba ny zava-mahadomelina rehetra. Ampidiro ny dosage, ny vokany, ny fampiasana ... sns.
admin, admin09 / 29 / 2018 ao amin'ny 4: 40 am
Amin'ny fampisehoana zava-mahadomelina mifampizara, dia hahazo fanazavana misimisy kokoa. Tsy ny vokatry ny tadalafil na ny voka-dratsin'ny Flibanserin, sy ny fanazavana momba ny dosie ... sns.
admin, admin09 / 29 / 2018 ao amin'ny 4: 29 am
Tsy midika inona ny Viagra amin'ny endrika volo, ny vatana mavitrika amin'ny Viagra dia sirilafil citrate poids
Cheska Summers09 / 25 / 2018 ao amin'ny 9: 24 am
Nanontany ny vadiko aho raha toa ka afaka manandrana ireny fanafody ireny indray mandeha indray mandeha. Indray mandeha, nahatsikaritra aho fa misy fahasamihafana tanteraka amin'ny fahombiazantsika nandritra ny fotoana izay nampiasantsika. Mety ho azo atao, na ny tena vokany. Saingy mbola tsy anisan'ny firaisana ara-nofo ataontsika isan'andro izany. Raha mila zavatra hafa isika.
Ryan Daniel09 / 25 / 2018 ao amin'ny 9: 21 am
Raha ny tena manokana, mbola tsy nanandrana zava-mahadomelina momba ny firaisana aho, fa mitazona ity lahatsoratra ity ho an'ny tanjona hoavy. Raha mety hahatonga ny traikefa ara-nofo bebe kokoa, dia tsy hitako izay antony tsy hampiasana izany. Na izany aza, heveriko fa tokony ampiasaina araka ny tokony ho izy ireo fanafody ireo mba tsy hiankin-doha amin'izany.
Albeneth09 / 23 / 2018 amin'ny 10: 49 pm
Moa ve azo antoka ireo fanafody ireo? Manantena aho fa tsy afaka miteraka fiankinan-doha izy ireo. Ambonin'ny zava-drehetra, ny mikaroka dokotera matihanina no tena manan-danja indrindra.
Doug Brians09 / 23 / 2018 amin'ny 5: 33 pm
Tsara ny fisian'ireo zava-mahadomelina ireo ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Izy ireo dia mitovitovy amin'ny fanampiana ara-pahasalamana izay azon'ny dokotera atao ny manoratra sy manonitra.
Hank Nolan09 / 23 / 2018 amin'ny 5: 31 pm
Tsara ny fisian'ireo zava-mahadomelina ireo mba hahafahan'ny olona manana fahasalamana ara-pahasalamana. Zava-dehibe avokoa ny vokatra rehetra sy ny fitandremana rehetra voatanisa.
Lionel09 / 23 / 2018 amin'ny 1: 47 pm
dapoxetine dia hanampy amin'ny fampihenana ny fifandraisana misy eo amin'ny samy olona fa mety ho fahendrena ny manandrana izany ho an'ny mpiara-miasa manana olana ara-pananahana toy izany.
Emma09 / 23 / 2018 amin'ny 1: 42 pm
Ny zava-mahadomelina ho an'ny firaisana ara-nofo toy izany dia tsy miasa ho an'ny tenany, ny tsy maintsy ezaka ataon'ny mpampiasa ary mazava ho azy eto fa mila ny fanentanana ny mpampiasa izany.
utibe09 / 23 / 2018 ao amin'ny 12: 32 am
Fantatro fa vovoka zava-mahadomelina tsara ho an'ny fampiasana fanabeazana ara-pananahana izany, saingy mety ho tsara ihany koa ny hilaza amin'ireo mpamaky sasany ny vokatra hafa ho an'ny vahaolana.
Diana09 / 23 / 2018 ao amin'ny 12: 24 am
Maro ny olana ara-panambadiana manoloana ny lehilahy manana fitomboan'ny sira sy ejaculation aloha. Tsara ny manatsara ny zava-mahadomelina toy izany mba hiatrehana ity olana ity.
Pietro Tee09 / 22 / 2018 amin'ny 9: 23 pm
Izany ve no lazainao fa ny fampivoarana ny firaisana ara-nofo, ny viagra, amin'izao fotoana izao amin'ny endrika volo? Joy! Amin'izao fotoana izao dia mahazo vagao amin'ny dite ianao. Saingy, ny fisambotra dia, tsy hanatsara ny fahaizanao izy, fa tapaho ny bisikao mba tsy hikororohana hahahahaha.
Sexy Mack09 / 22 / 2018 amin'ny 9: 19 pm
Marina ve izany? Izany no hahatonga ahy hihodinkodina amin'ny firaisana ara-nofo 15? Tokony hiteraka zava-mahadomelina izany fihetsika mamohehatra izany
Rhona Burchill09 / 22 / 2018 amin'ny 9: 05 pm
Tsy tena azoko antoka hoe maninona aho no tonga eto saingy, fantatro fa misy zavatra momba ny olana eropeile Ny tiako holazaina rehefa avy nanambady nandritra ny taona maro dia nanangona vatsy ho an'ny fanamiana ny fiarany ny vadiko. Raha mbola taloha ireo taloha dia ho maivana kokoa izy ankehitriny fa efa milay miaraka aminy.
Victor09 / 22 / 2018 amin'ny 8: 32 pm
Tsy izaho no misokatra amin'ny zava-mahadomelina momba ny firaisana ara-nofo raha farafaharatsiny amin'ny meds. Ny zavatra voajanahary toy ny ginseng no manao ny fanakatsakanana !!! Ny hany fomba ampiasako izany dia rehefa mihalehibe aho. Eny, raha ny marina dia heveriko izany.
Malik Vennity09 / 22 / 2018 amin'ny 7: 53 pm
Ny vokatry ny PDE5 ny Tadalafil sy ny traikefa mahafinaritra avy amin'ny vehivavy Viagra Flibanserin roa dia antony ampy ho an'ny lahy sy vavy ka mitady fanampiana mahasoa. Azoko antoka fa hisy antokon'olona maro ho an'ny dokotera voatanisa any Etazonia sy any ivelany.
Howy Ridell09 / 22 / 2018 amin'ny 7: 48 pm
Ny valiny sy ny fianarana klinika dia tena mampanantena. Ny fiainam-pianakaviana mahasalama dia manan-danja ho an'ny maro ary faly aho fa mandray tsara ireo zava-mahadomelina ireo.
Shanna Beltram09 / 22 / 2018 amin'ny 1: 03 pm
Zava-dehibe ny fampahalalana sasantsasany momba ny zavatra miditra ao alohan'ny handehanana miditra ao anaty kitapo na trano fidiovana miaraka amin'ny baggie feno zavatra. Mba hanampiana anao, dia nitety ireo sehatra medikaly nateraky ny zava-mahadomelina izahay, nifototra tamin'ny fetr'am-pahaizana voafetra, ary nanontany olona marobe-avy amin'ny tokontany tsy miankina amin'ny psychonauts, avy amin'ny mpankafy amina mpitsabo sy mpitsabo saina-araka izay azonay natao hananganana ity Ny fampahalalana rehetra misy any dia ny momba ny fihenan'ny alikaola.
Janine Marie Alexandra Bocateja09 / 22 / 2018 amin'ny 1: 00 pm
Ny sasany amin'ireo zava-mahadomelina ara-pananahana dia afaka manokatra anao ho afa-po tanteraka, raha ny hafa dia mpamono vady feno. Manonona ny zava-mahadomelina ianao, ary misy olona milaza fa tia manao firaisana.
nolly09 / 22 / 2018 ao amin'ny 5: 45 am
Tsara ny manatsara ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny lahy na ny vavy. Ity dia hanampy ny lahy samy lahy na vavy samy lahy na vavy, na inona na inona firaisana ara-nofo izany dia haverina amin'ny iray amin'ireo zava-mahadomelina ireo
Danny09 / 22 / 2018 ao amin'ny 5: 19 am
Izany dia azo antoka fa hanampy amin'ny famelomana ny fifandraisana sasantsasany izay tokony naterina noho ny olana ara-pananahana. Ireo mpankafy dia tokony handratra izany amin'ny fifohazana.
Vikram Parmar09 / 21 / 2018 amin'ny 10: 20 pm
Ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina dia mety ho faty. Mety hahatonga azy tsy hatoky tena kokoa amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo.
Mog Arten09 / 21 / 2018 amin'ny 7: 03 pm
Mahaliana fa mampitombo ny fahatsaran'ny firaisana sy ny fahafinaretana ireo fanafody ireo. Misaotra ny fizarana.
Miles Dubager09 / 21 / 2018 amin'ny 4: 41 pm
Fahatsapana mahaliana. Tiako ho liana raha toa ka misy fiantraikany amin'ny tsimokaretina ny Tadalafil na Flibanserin raha oharina amin'ny prescriptions. Misaotra ny fizarana!
Lisa Nataliany09 / 21 / 2018 ao amin'ny 9: 28 am
Faly aho mahita ity lahatsoratra ity ary hangataka ny vadiko hamaky izany koa. Mila firaisana ara-nofo ny tsirairay, tsy mila mahatsiaro menatra amin'izany. Misaotra anao mizara vaovao momba ny vovoka zava-mahadomelina ao amin'ity lahatsoratra ity, tena ilaina!
Richard Hanks09 / 21 / 2018 ao amin'ny 7: 59 am
Izaho sy ny namako dia mitady fomba hahatonga ny fiainan'ny lahy sy vavy hahaliana kokoa. Ireo zava-mahadomelina ireo dia mitovy amin'ny mendrika azy ireo. Misaotra!
Vincent Matthews09 / 21 / 2018 ao amin'ny 7: 56 am
Ankehitriny dia fantatro ny zava-mahadomelina ampiasaina hanatsarana ny fahatanterahan'ny firaisana mandritra ny fotoana voafetra. Misaotra, tia ny lahatsoratrao.
Tom Esthber09 / 21 / 2018 ao amin'ny 6: 39 am
Mbola tsy nanana olana tamin'ny fanaoko aho, ankoatr'izay nampahatezitra ahy matetika. Heveriko fa mety mila ireo famatsiana PDE5 ireto tao anatin'ny roa taona na dia hihihi aza haha.
benedicta09 / 21 / 2018 ao amin'ny 1: 32 am
Hampahatsiahy an'i Udenafil aho satria izy io dia toy ny viagra izay ampiasain'ny olona. Ny zavatra tsara momba ity iray ity dia ny voka-bary.
babi09 / 21 / 2018 ao amin'ny 1: 26 am
Ny fahafinaretana mandritra ny firaisana dia tena manan-danja ho an'ny mpiara-miasa ary afaka manamboatra na manimba ny fiainany ara-nofo. Manantena aho fa ireo izay tsy manana fahafinaretana dia afaka mampiasa ity fanafody ity noho ny soa ho azy manokana.
Mark09 / 20 / 2018 amin'ny 11: 34 pm
Tiako ny toerana nanondroanao fa raha tsy voavaha amin'ny olana ara-pananahana ny olana ara-pananahana, dia tokony hifantina dokotera aho. Hitako fa izany no zavatra tsara indrindra tokony hatao ao anatin'io toe-javatra io.
Nunu09 / 20 / 2018 amin'ny 11: 27 pm
Ny fiainana ara-pananahana amin'ny mpivady dia toy ny tariby mivantana ny fifandraisana toy izany dia tsy maintsy ampitomboina isaky ny vaninandro izany. Tsara ny mampiasa ny iray amin'ireo fanatsarana ireo ho tsara ny fifandraisana.
Fredrick Isinguard09 / 20 / 2018 amin'ny 11: 21 pm
Amin'izao fotoana izao ireo fanafody ireo dia ampiasain'ny tanora salama izay olana. Na dia izany aza, nahatonga ny olon-tsotra sy ny olona niharan'ny aretina izy ireo mba hamerina amin'ny lafin-javatra sarobidy eo amin'ny fiainany.
Captain U09 / 20 / 2018 amin'ny 10: 44 pm
Angamba izao no fotoana izao hiresahana momba ireo zavatra ireo amin'ny toeram-pitsaboana mivantana, ny fanaovana firaisana ara-nofo, ny fanaovana firaisana ara-nofo. Tena tiako ny manao firaisana ara-nofo raha oharina amin'ny olana. Amin'izany, faly aho fa misy ireo lahatsoratra ireo. Farafaharatsiny dia manaiky izany ny vahoaka.
mạch09 / 20 / 2018 amin'ny 9: 46 pm
Aiza anefa ireo pitsopitsony? Midika ve izany? Aiza ireo fitaovana sy zavatra? Midika ho zava-manahirana anao aho, satria fantatro ny zava-mitranga.
Bradley Lavender09 / 20 / 2018 amin'ny 4: 17 pm
Feo toy ny fitsaboana tsara sy azo antoka ara-pahasalamana ho an'ny fampiasana firaisana ara-nofo. Tiako ny mitady fanafody na fanafody tsy tokony hatao rehefa mampiasa Tadalafil na Flibanserin. Misaotra ny fizarana.
Curt Rancher09 / 20 / 2018 amin'ny 4: 14 pm
Horary ho an'ny libido avo lenta! Dyclonin sy flibanserin dia mitovitovy amin'ny fitaovana matanjaka amin'ny fanatsarana ny fanaovana firaisana ara-nofo. Misaotra ny fizarana.
AJ09 / 20 / 2018 amin'ny 1: 21 pm
Ny fahalalana dia hery, na inona na inona endrika mety horaisiny. Farafaharatsiny dia tokony mila karazana fankaherezana aho mba hahatonga ny firaisana ara-nofo ho mahafinaritra kokoa, fantatro izao izay tokony hatao.
David Tjoe09 / 20 / 2018 ao amin'ny 9: 17 am
Ity no lahatsoratra tena mahaliana indrindra hamakiana ... :). Nanandrana nampiasa izany aho indray mandeha - fotsiny amin'ny fahalianana. Ary am-pahatsoram-po, tsy mankafy izany aho ... Tsapako fa mihamitombo haingana ny foko ary mahatsiaro ho tsy mahazo aina ao an-dohako.
Harold Adams09 / 20 / 2018 ao amin'ny 5: 40 am
Tena nanampy ahy i Avanafil. Efa saika kivy aho rehefa niatrika ny olana ara-panananako, ary noho ny fankasitrahana ahy dia nosoratana avanafil.
Joel Warner09 / 20 / 2018 ao amin'ny 5: 38 am
Nampiasa siedra sildenafil aho rehefa nanana olana. Naka fotoana elaela izany, nefa tena nahomby izany.
admin, admin09 / 20 / 2018 ao amin'ny 4: 17 am
Namana tsara indrindra, ny singa fototra amin'ny Viagra dia sildenafil citrate, CAS 171599-83-0, azonao atao ny mahita ny antsipiriany eo ambany tadalafil CAS 171596-29-5.
Mozd09 / 20 / 2018 ao amin'ny 4: 08 am
Azoko antoka fa ny lehilahy amin'ny ejaculation aloha dia tsy mieritreritra ny manandrana Vardenafil ho toy ny zava-mahadomelina izay afaka manatsara ny penile erectile malaky ary manampy ny kalitao sy ny faharetan'ny firaisana.
Bolly09 / 20 / 2018 ao amin'ny 4: 01 am
Manantena aho fa ny lehilahy manana fantsom-bolo erectile dia hamaky ny Sildenafil citrate mba hividianana azy ireo hamerenany ny fananganana azy. Tena zava-dehibe tokoa amin'ny fiainana ara-pananahana izany.
Joey09 / 19 / 2018 amin'ny 10: 09 pm
Tsy fantatro ny antony hamakiako izany. Haha. Fa fampahalalana lehibe momba ity raharaha ity. Ataovy fotsiny hanontany amin'ny manam-pahaizana iray alohan'ny handraisany fanafody fanaovana firaisana.
Kurt09 / 19 / 2018 amin'ny 9: 14 pm
Manoro hevitra ny dokotera aloha aho alohan'ny handraisanao ny iray amin'ireo fanafody ireo. Midika izany fa matetika aho mamaky tranga izay misy olona maty noho izany. Mivoaka ara-bakiteny miaraka amin'ny fihomehezana.
Jiffy Rando09 / 19 / 2018 amin'ny 8: 59 pm
Soa ihany fa tsy mila. YET ary manantena fa tsy hisy mihitsy. Na izany na tsy izany, mahagaga ahy ny Viagra dia tsy eto.
zaza09 / 19 / 2018 amin'ny 7: 05 pm
8 mampihetsiketsika zava-mahadomelina mivantana, izany dia manome ny fahatsapana safidy sy miasa am-pahamarinana amin'ny safidy. Miankina be dia be ny fanandramana ara-piraisana ara-nofo iray ary tena hanampy tokoa ireo vovobony ireo.
Teddy09 / 19 / 2018 amin'ny 6: 57 pm
Ity lahatsoratra tena mafana ity, mpivady dia hahita ity hafatra ity mahavariana amin'ny fanatsarana ny fiainany ara-pananahana. Mila manokana an'ity vaovao ity aho ary hijery ny fampiasana ny olona rehetra izay tsara ho an'ny rafitrao. Izany fampahalalana dia tonga ara-potoana, afaka mividy sy andrana tsy misy prescription.
Landen Burrows09 / 19 / 2018 amin'ny 5: 10 pm
Hahazo antoka aho fa hampirisika azy ireo ho namana mavitrika ara-nofo ary te-hampitombo ny faniriana hanao firaisana! Misaotra ny fizarana.
Moz Chesk09 / 19 / 2018 amin'ny 4: 25 pm
Tahaka ireo fanafody mahasoa mba hampiroboroboana ny fiainan'ny firaisana ianao, ary hahafantaranao izay zava-mahadomelina atao aminao. Misaotra ny fizarana!
Moch Sugih09 / 19 / 2018 amin'ny 12: 35 pm
Heveriko fa ny fanafody mametaveta tahaka izao dia mety miteraka fiankinan-doha, ary mahatonga antsika hahatsapa ho tsy dia matoky loatra rehefa tsy mampiasa azy ireo isika. Mety ho tsara anefa izany raha tsy ampiasainao matetika izany, ny Mistera dia bebe kokoa.
Leonard Wesley09 / 19 / 2018 ao amin'ny 7: 25 am
Tsy dia misy dikany loatra momba ny zava-mahadomelina, toy izany koa ny fanafody mamoafady. Ary tena manampy amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo ??
Alfonso Franklin09 / 19 / 2018 ao amin'ny 7: 21 am
Wow, tsy fantatro fa misy karazana firaisana ara-nofo amin'ny lahy sy ny vavy mitovy. Mahaliana tokoa ny mamaky!
Swiss09 / 19 / 2018 ao amin'ny 2: 35 am
Manantena aho fa ireo izay tena mila izany fampahalalana izany dia afaka mamaky ity lahatsoratra ity. Mihevitra aho fa hanampy azy ireo ny fanentanana amin'ny firaisana ara-nofo, satria hanampy azy hifandray tsara amin'ny mpivady izany.
Feddy09 / 19 / 2018 ao amin'ny 2: 27 am
Tena olana sarobidy ao amin'ny Post.Sex no manimba ny fianakaviana sasany ary mifanentana amin'izany fa tokony hatsangana ny zava-mahadomelina toy izany, ary haka an-keriny. Tena mahagaga fa afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny libido ireo fanafody ireo.
MAG inhibitor sy FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750 Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny 2018